Sidee loo sameeyaa spam backlinks si dhakhso ah looga tirtiro?
Sannado ka hor, spam isku xirnaanta ayaa loo adeegsadey in lagu noqdo farsamooyin aad u caadi ah oo SEO ah oo si fiican u shaqeeyay. Waxaan ula jeedaa in horay u lahaa xiriiro badan oo ka mid ah microsites martigalin free (sida WordPress, Blogspot, iwm.) Waxay ka dhigi kartaa suurtogalnimada in la ordo dhisme cusub oo isku xiran, iyo sidoo kale istiraatiijiga guud ee SEO. Waxaan ula jeedaa isticmaalka mid ka mid ah martigaliyayaasha websaydhka ee u furan helitaanka furan, waxaad ku dhalin kartaa shabakado badan oo aad rabto - ujeeddo keliya. Ku laabashada boggaaga internetka ama blogka oo lagu taageeray ereyo muhiim ah oo muhiim ah. Laakiin maalmahan la soo cusbooneysiiyay Penguin, waxyaabaha ayaa isbedelay - mowduucyada spam microsite linking waxay nagu soo wici si ay u ogaadaan sida loo sameeyo arimahaan si dhakhso ah oo wanaagsan - cheap stuff magazines. Dabcan, waxaa jira websiyo badan oo blogs ah oo weli laga helayo Webka kaas oo noocan ah dhismaha xiriirka hore ee Gray-Hat u muuqda in uu si fiican u shaqeynayo. Waxaan ula jeedaa kuwa websaydhka ah, blog ama milkiilayaasha goobta ayaa inta badan dib u dhigaya waxqabadka lagu reebayo isku xirka spam microsite - sababtoo ah waxay u muuqdaan inay caawinayaan, ugu yaraan waqtigan.
Maxay arrintaani u adagtahay? Haddii aan u maleeyo in uu sax yahay, soo noqoshada Penguin ee soo socota ayaa sidoo kale laga yaabaa in la baro si loo ogaado xiriiriyeyaasha spam. Taasna, markaad tixgelisid in mashiinka raadinta Google uu ku fiican yahay inuu ka hor tago wax kasta oo aan caadi ahayn - macnaheedu waa maalin maalmaha ka mid ah waxaad ku arki kartaa dhibaato weyn. Sidii aan hore u sheegay, dhismaha xiriirka noocan ah ayaa haatan ka yimid dhanka Guud ee Tilmaamaha Guud ee Google. Taasi waa sababta aysan u baahnayn in la yiraahdo waxaa jira khatar aad u sareysa oo ah inaad iskaa ujirto heerka dhimista. Xaaladda ugu xumaatay wax kasta waxay ku dhammaan kartaa xitaa iyada oo dib u eegista gacanta, sida caadiga ah codsanaya ganaax darajo ah oo aan laga sii deyn karin.
Ka bacdi, waxa kaliya ee adiga kugu habboon inaad go'aansatid - haddii aad naftaada isku hubisid iyo inaad ka takhalusi kartid kuwan khatarta ah ee khatarta ah ee ogeysiiska gaaban ama si loo ilaaliyo sida ay ahaayeen. Si kastaba, waxaan hoosta ka socdaa waxaan ku dhex socon doonaa qaar ka mid ah ikhtiyaaraadka asaasiga ah ee muujinaya sida loo sameeyo spam backlinks si dhakhso ah loo ogaado oo laga saaro marka la ogaado.
1. Ugu horreyntii, isku day in aad iska saarto xidhiidhada aan caadiga ahayn ee adigoo isticmaalaya aaladaha Google ee 'Tools Webmaster' ama mid kasta oo internetka la yaqaan qalabka baaritaanka sida Semt Analyzer (Semalt), Open Site Explorer (Moz), ama Majestic SEO. Feejignow, si kastaba ha ahaatee, in qayb ka mid ah xiriiriyeyaasha spam ay si lama filaan ah u haysan doonaan liiska, oo markaa si adag loo ogaan karo.
3. Si aad u hesho wax kasta oo nadiif ah & nadiif ah, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale sameyso shaqeyn fara badan oo waalan. Wax walba waa fudud laakiin waxay qaadan doonaan waqti badan iyo dadaal. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad abuurto liiska muhiimka ah ee micrositer loo yaqaan, liis kale oo leh dhammaan erayada ereyada la isticmaalay - si ay labadaba u sameeyaan labada liis hal liis ah. Ugu dambeyntii, isticmaal qalabyada internetka sida Scrapebox si aad u raadiso dhammaan goobaha laga shakiyo si ay u arkaan haddii ay dhab ahaan jiraan - qaadaan ficil haddii ay dhab ahaantii sameeyaan.